We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီနွေရာသီ ဘယ်ကိုသွားရင် ကောင်းမလဲ လို့ စဉ်းစားနေသူတွေအတွက်
ဒီနွေရာသီ ဘယ်ကိုသွားရင် ကောင်းမလဲ လို့ စဉ်းစားနေသူတွေအတွက်
The bumper stickers read “Ithaca is Gorges” for good reason, as shale channels provide the Northeast’s best assortment of natural swimming pools. Buttermilk Falls State Park also providesawide cascading swath of freshwater, and is justaskipping stone’s distance from city center. Visitors to Treman State Park encounteradozen falls en route to the deep pools beneath the lower falls of Enfield Creek. The 115-foot-tall Lucifer Falls is up the path away from the swimming area, where the adventurous slide beneath the falling water and the thrill seekers jump from the shale plateau six feet above the deepest pool.
ဒီရေတံခွန်က အီသာကာ မြို့မှာရှိတယ်။ နာမည်ကြီး သဘ၀ရေကူးကန် တခုဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီအပန်းဖြေ စရာအဖြစ်သွားခြင်ကြတယ်ဆိုရင် သွားနိင်ဖုို့ ပါ။
Pfeiffer State Beach, Big Sur, Calif.
ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်က မြန်မာ တွေအတွက်တော့ Pfeiffer State Bach က
နာမည်ကြီး ၊ရေကူးလို့ သိပ်ကောင်းတယ်။
Franconia Falls, Lincoln, N.H.
နယူးဟန်ရှား ပြည်နယ်က မြန်မာ ပြည်သားတွေအတွက်တော့ Franconia Fall , Lincoln ကို သွားပါလေ။
သဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဘယ်လို ထိမ်းသ်ိမ်းထားသလဲ။ သန့် ရှင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးထားသလဲ။ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုဘယ်လို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးထားသလဲဆိုတာတွေကို လေ့လာမှတ်သား နိင်ပါတယ်။
မြန်မာ ပြည်အတွက် ပြန်လည် လုပ်ဆောင် ပေး ဖို့မှတ်သား ထား ကြပါစို့ ။